नायक जय किशन बस्नेतको चलचित्र हिरो नं. १ युट्युबमा सार्वजनिक – newslinesnepal
नायक जय किशन बस्नेतको चलचित्र हिरो नं. १ युट्युबमा सार्वजनिक
प्रकाशित मिति : २० चैत्र २०७६, बिहीबार १६:०५
काठमाडौं २० चैत
नायक जय किशन बस्नेतले पछिल्लो पटक निर्माण गरेको चलचित्र हिरो नं. १ डिजिटल माध्यम युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ । नायक बस्नेतकै लेखन, निर्माण तथा निर्देशन र मुख्य अभिनय रहेको उक्त चलचित्र मोबाइृल भिी च्यानल मार्फत सार्वजनिक भएको हो ।
हेर्नुहोस् पूरा चलचित्र